I-Comfy Apt kunye neendawo zokupaka entliziyweni ye-Hurstville
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNicole
UNicole unezimvo eziyi-636 zezinye iindawo.
Ifakwe entliziyweni ye-Hurstville, ukuba uthanda ukutya kwase-Asia awukwazi ukungahambi kakuhle hlala kwigumbi lam. Ngeemfumba zeendawo zokutyela zaseAsia kunye neeresityu ezihloniphekileyo kule ndawo, uya kufumana ubomi bulula kakhulu, nokuba kusebusuku kakhulu. Kwimizuzu nje emi-5 yokuhamba ukuya kwisikhululo sikaloliwe esikufutshane, ungafika esixekweni kwi-15min ngololiwe. Ifulethi lam likwabonisa igumbi lokuhlala elibanzi, i-balcony enombono, indawo yekhitshi evulekileyo, iilinen ezikumgangatho ophezulu kunye namagumbi okulala a-2 atofotofo kunye neendawo zokupaka zasimahla!
Qaphela: le propati ayinakuqeshwa ukuba isetyenziselwe urhwebo!
I-tv iyafumaneka ngoku
Ukuhamba ungene kwindlu yam, uya kuchukunyiswa yindawo yokuhlala ebanzi kunye nembono entle evela kwibalcony. Iisofa ezikhululekile ziyakwenza ukuba ufune ukuphumla kwaye ube yitapile yokulala. Ifenitshala yamaplanga kunye nomgangatho wongeza imvakalelo yeZen kwindlu yam.
Isiqithi sasekhitshini kunye nesidlo esivulekileyo sikwadala imeko-bume enobudlelwane kunye nenobubele yeendwendwe zakho kunye nosapho ukuba bahlangane kunye nokuba kukutya okwenziwe ekhaya okanye isiselo esiqhelekileyo.
Amagumbi okulala amabini eza nelinen ezikumgangatho ophezulu, imiqamelo, iikhushini kuzo zonke iibhedi zekhaya. Ndiza kubonelela ngeshampu, isepha, isilungisi seenwele kwizindlu zangasese ezimbini. Ke akukhathaliseki nokuba ulapha nosapho lwakho okanye uhambo lweentsuku ezimbalwa zeshishini, akufuneki ukhathazeke ngayo nantoni na.
Indlu yam yayine-wifi, ikhitshi esebenza ngokupheleleyo, zonke iitawuli ezibalulekileyo, iitawuli zesandla, isixhobo sokomisa iinwele, intsimbi, ibhodi yentsimbi kunye nazo zonke izinto ozifunayo.
Ngamafutshane, nazi iindawo eziphambili zepropathi yam.
+ Indawo entle kakhulu
+ Khusela indawo yokupaka
+ Amagumbi okulala ama-2 amnandi
+ Ibhalkhoni enombono
+ Igumbi lokuhlala elibanzi
+ I-Couch ekhululekile
+ Ikhitshi legourmet elixhotyiswe ngokupheleleyo
+ Amagumbi okuhlambela ale mihla kunye nezinto zangasese
+ I-intanethi ye-wifi ekhawulezayo kunye ne-Smart TV
+ Ilinen yebhedi ekumgangatho ophezulu kunye neetawuli ezisemgangathweni
+ Indawo yokuhlamba kunye ne-ayina
Ukuba uthanda ukutya kwaseAsia, awukwazi ukungahambi kakuhle uhlala kwindawo yam
Nceda uqaphele ukuba isitshixo se-Apt kunye negaraji ekude iya kugcinwa kwivenkile ekufutshane ekufutshane ukuba uyithathe, kwaye nceda uqaphele ukuba iiyure zokuvula ivenkile ziqala nge-9 am - 9pm, ngoko ke ukuba uceba ukungena emva kwexesha. 9pm, kuya kufuneka uze kwiofisi yethu ekufutshane nesikhululo seMascot ukuze uthathe isitshixo, kwaye unokuthatha indawo ekude yegaraji ngexesha lokuvulwa kwevenkile.
Ukuba uza kujonga phambi kwe-9 am, shiya izitshixo ngaphakathi kwegumbi ngaphandle koko nceda ubuyisele izitshixo kwivenkile efanelekileyo kwaye uqiniseke ukuba usithumelele ifoto yendawo ephambili xa uphuma.
Nceda uqaphele ukuba isitshixo se-Apt kunye negaraji ekude iya kugcinwa kwivenkile ekufutshane ekufutshane ukuba uyithathe, kwaye nceda uqaphele ukuba iiyure zokuvula ivenkile ziqa…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-16804
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$213
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hurstville